DEG DEG:Alshabaab oo gacanta ku dhigtay xaruntii uu degenaa Abuu Mansuur iyo Maydadka oo yaacsan …. | SOMALI SUN |
DEG DEG:Alshabaab oo gacanta ku dhigtay xaruntii uu degenaa Abuu Mansuur iyo Maydadka oo yaacsan ….
Wararkii ugu dambeeyay oon ka helnay gobolka Bakool ayaa sheegaya in dagaalka u dhaxeeya dagaalyahanada Al Shabaab iyo dagaalyahano kale oo taabacsan Sheekh Muqtaar Roobow Abuu Mansuur uu sii xoogeestay kuna sii fiday deegaano hor leh.
Dagaalyahano aad u hubeesan oo katirsan Al Shabaab ayaa dhoor jiho ka weeraray Deegaanka Abal uu ku sugnaa Abuu Mansuur, waxaana deegaankaasi saakay ka dhacay dagaal xoogan oo dhiig badan ku daatay, waxaana ugu dambeyn deegaankaasi dagaal kula wareegay dagaalyahanada Al Shabaab.
Sida aan Wararka ku heleyno Al Shabaab ayaa isku fidisay deegaanka Abal ay kala wareegeen kooxdii taabacsaneed Abuu Mansuur, waxaana dagaalka hada uu ka socda dhinaca howdka ay iskula baxeen labada dhinac ee dagaalama.
Meydadka dagaalyahano katirsan labada dhinac ee dagaalamaya ayaa lagu soo waramayaa in ay yaalaan deegaanka Abal iyo duleedkeeda, waxaa sidoo kale jira gaadiid dagaal iyo hub badan oo labada dhinac kala qabsadeen.
Al Shabaab ayaa helaya gurmad badan oo uga imaanaya gobolo kala duwan, waxaana dagaalka uu hada u muuqdaa in looga awood sareeyo ciidamadii taabacsanaa Sheekh Muqtaar Abuu Mansuur kuwaa oo u badnaa kuwa ku heyb ah.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in Abuu Mansuur uu ka dalbaday in ay gurmad u diraan, waxa uuna sheegay Afhayeenka mamaulkasai in ciidamo gurmad ah oo katirsan maamulka Koonfur Galbeed loo dirayo Abuu Mansuur.
Al Shabaab ayaan wali ka hadlin duulaanka ay ku qaadeen deegaankii uu ku suganaa Abuu Mansuur oo mar soo noqday kuxigeenka Amiirka kooxdaasi , sidoo kale ma jiro war kasoo baxay dhinaca Abuu Mansuur oo isna dagaalkaasi ku aadanaa.